Phupha ngeQota Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neQota
IiFairies zizidalwa zasentsomini ezinemvelaphi yazo ikakhulu kwiintsomi zamandulo zamaCeltic okanye amaRoma kwaye zanikwa amandla angaphezu kwawemvelo kula mabali. Igama elithi Intlawulo lithatyathwe kuFata, oothixokazi baseRoma bexesha elizayo.
Kuxhomekeke kudidi lweefiriyisi, ezi zinokubonakala kwiintsomi ngeendlela ezahlukeneyo. Umzekelo, oothixokazi bekamva badla ngokuba ngamashumi amathathu okanye, kunqabile, isixhenxe okanye ishumi elinambini, apho bafumaneka ekhaya kwiigorge ezinamatye kwaye banokwenziwa bangabonakali njengesipho esikhethekileyo. Kwintsomi yamaCeltic oomoya abaphambili babephambili, ababehlala kwindawo evulekileyo ngakumbi emanzini nasemithonjeni, emiqolombeni enamatye kwaye ngokubanzi emahlathini.
Namhlanje, ii-fairies ikakhulu zinxulunyaniswa neentsomi kunye nomdlalo bhanyabhanya okanye uthotho lweTV. Kukho ii-fairies ezilungileyo apha ezinokuthi zenze ukuba iminqweno izaliseke, njengegorha lebali ngamanye amaxesha kufuneka lilwe nentsomi engendawo.
Ngaphandle kwamaphupha, ii-fairies zinokubonakala njengezidalwa ezingaphezu kwendalo, ke imbonakalo inokwahluka kakhulu. Ngelixa umntwana ephupha ngentsomi kunokuba abeyinkosazana enomlingo, uhlobo oluthile lomoya wendalo unokuvela ephupheni lomnye umntu.
1 Uphawu lwephupha «intsomi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intsomi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intsomi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «intsomi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kwiimeko ezininzi, intsomi njengephupha itolikwa ngokuqinisekileyo njengomqondiso wethemba. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba kukho intsomi elungileyo ephupheni. Intsomi enjalo inokukunceda, umzekelo, ikuncede uphuphe ephupheni lakho kwimeko enzima kwaye ikukhusele kwiingozi. Kwelinye icala, intsomi engendawo ihlala ikwimo yegqwirha. Ngamanye amaxesha ujongeka ngokuchanekileyo njengentsomi elungileyo, ukanti uyala ukunceda ukuphupha ngaphandle kwemeko enzima.
Ngokubhekisele kwiintsomi, intsomi ifuzisela njengomfanekiso wephupha. Umfazi y inkxasoukuba ukuphupha kufumana kwinto okanye umntu ongaphumi kuthi, kodwa kwilizwe elingcono. Mhlawumbi uyazi imeko yeentsomi yokuba uthixokazi ngumntu othile Iminqweno emithathu kuqinisekisiwe, oko kuthetha ukuba unokuguqula iimeko ezixakekisayo zibe zezilungileyo.
Ke iphupha ledyokhwe ngamanye amaxesha livela xa iphupha likholelwa kwimeko enjalo kwaye ngokungxamisekileyo lifuna uncedo olungaphaya kwendalo. Ukuba uvumelekile ukuba unqwenele into ephupheni lakho, iminqweno yakho inokuba sisalathiso sendlela onokujongana ngayo nengxaki yakho kwimeko yokuvuka.
Intsomi ihlala isetyenziselwa ukutolika iphupha njengophawu lwenye. umfazi ozala umama ibone oko kulamla ukhuseleko koomama kwaye ikhathalela kwaye ikhusela abanye. Iphupha lamabali lingakunika olu khuseleko okanye lubonise ulangazelelo lwakho kolo shushu.
Uphawu lwephupha «intsomi» - ukutolikwa kwengqondo
IiFairies zihlala zibonakala njengophawu lwephupha. Amandla asisiseko Ke ukuba uphupha ii-fairies okanye ii-elves, eli phupha linokubonisa ukuba uqhagamsheleke kangakanani kunye nalawo mandla angaphakathi kuwe. Kungenzeka ukuba uqaphele kuphela izinto ezithile ezisisiseko kubuntu bakho ngephupha, elihlala libandakanya iimpawu ezintle.
Ukongeza, ii-fairies zikwangabathandi benkululeko ekuchazeni amaphupha. Izenzo zomntu ixhunyiwe, engenakuthintelwa okanye ivalelwe. Ke iphupha leentsomi lingakubonisa ukuba ezinye iindawo zobuntu bakho zifuna ukuba simahla kwaye zenzeke ngokuzenzekelayo.
Olunye utoliko olunokwenzeka lomfanekiso wephupha yintsomi njengophawu lomnqweno wokuthandana. ubudlelwane bothando ukubona ephupheni. Iintsomi emva koko zinokuba yinxalenye yephupha lakho ukwenza lo mnqweno ucace kuwe okanye, ubuncinci ephupheni, ukuze uwuzalisekise.
Ukuba indoda iphupha ngentsomi, inokufuna ukuba umfazi wayo okanye intombi yakhe ibe ntle kwaye ifane nentsomi. Okanye iphupha lakho limele iinkalo zakho zobufazi, ezibizwa njalo anima. Kwiphupha labasetyhini, intsomi ibonisa ukuzimela kwephupha, ekunokwenzeka ukuba lomelezwe kwaye lipolishwe kancinci.
Uphawu lwephupha «intsomi» - ukutolika kokomoya
Intsomi ephupheni inako ukutolika amaphupha okomoya ngokufikelela kwilizwe le ukuqonda okungaphaya kwendalo qhagamshela.
Iphupha malunga noMbhaki